हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल Archives - VOICE OF NEPAL TV
काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा रहेको राराताल मुलुककै पर्यटनको आकर्षण मानिने ताल हो । याे माैसममा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक घुम्ने थलोमध्ये राराताल एक हो । नयाँ वर्षको अवसर पारेर देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारातालमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल निकै बढेको छ । नयाँ वर्ष लाग्न केही दिन बाँकी ...
भीम चाैधरी, कैलाली । चिसापानी बजारबाट करिब डेढ किलोमिटर उत्तर कर्णाली नदीको तिरैतिरको यात्रापछि मोहन्याल गाउँपालिका–७ पितमारीमा पुगिन्छ । तराईको धुपबाट त्यहाँ पुग्दा शीतलताले दिने आनन्द निकै लोभलाग्दो हुन्छ । त्यति मात्र होइन, अचेल यहाँ पर्यटकले जिपलाइनको मज्जा लिन पाएका छन् । कर्णाली तटमा सञ्चालनमा ल्याइएको...
दीपा गुरुङ, खोटांग /रावाबेशी लिलाराज खतिवडा द्वारा लेखिएको उपन्यास म को हुँ मैले दुई पटकसम्म पढेँ । दोहोर्याएर पढ्दा पनि मलाइ दिक्क लागेन । यसमा पस्किइएका विभिन्न विधाले सबैखाले पाठकलाई पूर्णरुपमा सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ जस्तो महसुस भयो । कतै झर्को र दिक्क लागेन । अब के होला ? अब के होला ? भन...
बैतडी । सुदूरपश्चिमेलीको मुख्य पर्व गौरा आइतवारदेखि शुरू भएको छ । पौराणिक कालमा भगवान् महेश्वरको प्राप्तिका लागि गौरा देवी अर्थात् पार्वतीले निराहार नित्य आराधना गरी शिव प्राप्ती गरेको विश्वास गरिन्छ । सोही समयदेखि गौरा र महेश्वरको विवाहको सम्झनाका रूपमा यो पर्व मनाउने परम्परा चल्दै आएको पण्डित रमेशचन्द्र कलौनी...
- दानबहादुर बुढा, मुगु । लकडाउनपछि मुलुकको अन्य पर्यटकीय क्षेत्र झै कर्णाली प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरु पनि चहलपहलविहीन बनेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, हिमाल, ताल नदीलगायतका महत्वपूर्ण पर्यटकीय गतिविधिले भरीभराउ हुने क्षेत्रहरु सुनसान छन् । कर्णाली प्रदेशमा रहेक...
डडेल्धुरा /नेपाल नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर डडेल्धुराको भागेश्वर गाँउपालिकाले ‘घुम्न जाऔँ भागेश्वर’योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको अभियानलाई सार्थकता दिन र भ्रमण वर्षलाई सफल पार्नका भन्दै गाँउपालिकाले १ जना लाई पर्यटन फोकल प्रर्सन तोकेको छ । योजनासँगै भागेश्वर पर्यटन पेज, सञ्चारमाध्यम र समाजिक सञ्जालब...
- रमेश ढुंगाना पञ्चकोसी दैलेख जिल्लामा पर्ने नेपालकै एक पवित्र तीर्थस्थल हो। यो क्षेत्रमा नित्य प्रज्वलित ज्वालाहरू अवस्थित भएकाले यस तीर्थस्थललाई ज्वाला क्षेत्र अथवा ज्वाला तीर्थ, बन्नी तीर्थ पनि भनिन्छ। हिन्दू धर्मको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ स्कन्द पुराणमा यस क्षेत्रलाई वैश्वानर तीर्थ भनेर वर्णन गरिएको छ। यस तीर्थलाई...
विमल विष्ट, डोटी । डोटीको जोरायल गाउँपालिका वडा नं २ छतिवनमा आज प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान गरिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर छतिवनमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान गरिएको हो । छतिवनको रिठा, बुडर, रुपसकाँडा लगायतका ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ उडान सफल भएको प्याराग्लाइडिङको अमेजिङ एडभान्चर प्रालिका भुपेन्द्...
चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा । सु्न्द्रावतीका खड्गबहादुर शिवाकोटीले ६० बर्ष अघिको एउटा घट्ना सम्झिए । सुन्द्रावती सेतिदेवीको महिमा बर्णन गर्दै उनले भने – म त्यस्तै १२ बर्षको थिए, हाम्रो ६० वटा खसी बोका (बस्तु) जङ्गलमा चराएर फर्कदै गर्दा तीन वटा हराए अनि बुबाले सुन्द्रावती सेतिदेवीको कुण्डमा धुप बत्ति गरेपछि हराएको चौथो द...